Masuuliyiin katirsan Puntland oo ka warbixiyey socdaal ay ku joogaan Deg Ufayn – SBC
Masuuliyiin katirsan Puntland oo ka warbixiyey socdaal ay ku joogaan Deg Ufayn
Wafdigan ayaa ujeedkoodu wuxuu ahaa sidii ay wacyigalin ugu sameyn lahaayeen dadka dega degmada Ufayn iyo deegaanada hoosataga , sidookale wafdigana ayaa waxa ay isgu jiraan mas,uuliyiin katirsan Dawlada Puntland iyo Waxgarad culima awdiin Kasoojeeda deegaankaas.
Waftigan waxaa kamida wasiir kuxigeenka wasaarada waxabarashada Puntland Maxamuud Maxamd Idiri, Wasiirkuxigeenka Wasaarada Aminga C/dirisaaq Xareed ismaaciil iyo Agaasimaha guud ee wasaarada Dekadaha iyo gadiidka Dadad c/dirisaaq Samatar Jaafaan .
Wasiirkuxigeenka waxbarshada Puntland oo lahadlaayey SBC International ayaa waxa uu sheegay in hawlihii ay u tageen Degmada Ufayn ay wax badan ku guuleysteen islamarkaasina ay wacyigalin badan u sameeyeen dadka deegaanka ku dhaqan .
Wuxuu sidoo kale wasiirku sheegay in ay fureen wadadii kobdhexaad oo ay horay u fadhiyeen maleeshiyo beeledyo.
“waxaan ku guulaysanay inaan dhamaan dhalintii halkaasi joogay aan hubkii ka uruurinay si aysan dadka wax ugu geeysan” saas waxaa yiri wasiir kuxigeen waxbarshada Puntland.
Socdaalka waftiga Puntland ayaa kusoo Beegmaya xili ay dhawaan soo cusboonaatay dagaal u dhexeeya laba Qabiil oo Dega Gobolka Bari .
Julaay 13, 2011 at 2:17 pm
waaan ku faraxsanahay mas uuliyiinta kasoo jeeda degmada ufayn oo socdaal wacyi galin ah ka wada degmada iyo deegaamada hs yimaada, waxaana ilaahay ka baryaynaa in u colaada qaboojiyo , waxa la yiri hadaan lakala roonaan roobma da’o, xumaanta walaalkaa kaaga timaada waxaa loogu badalaa wanaag , marka dadka dhimanaya waa dad ka dhimanaya puntland , waa kaa dhimay kugu dhimay, marka maslaxada halaga shaqeeyo cali jibrahil iyo cali saleban colaadooda waxay wax u dhimaysaa sumcada puntland waxaana ku farxaya cadow badan oo gudo iyo dibadba leh